နီနီရဲရဲလန်းတဲ့ Dell. i5 အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
နီနီရဲရဲလန်းတဲ့ Dell. i5
#Photo ရှော့မလား၊ ဂိမ်းသုံးမလား၊ ရုံးသုံး၊ ကျောင်းသုံး
#Dell နော် အရမ်းမာတယ်
#CPU ဆိုတာ Core i5 2nd generation
#Hard disk ဆိုတာ 1000GB နဲ့ရှယ်ပဲရှယ်ပဲ
#Graphic ဆိုတာ AMD 1GB နဲ့ Intel HD 2GB နဲ့
စုစုပေါင်း 3GB ထွက်တယ်
#Battery ဆိုတာ 2hrs လောက်အေးဆေးသုံး
အမည်: နီနီရဲရဲလန်းတဲ့ Dell. i5